I Lima , renivohitr'i Però , dia miorina amin'ny morontsirak'i Oseana Pasifika. Na dia heverina ho iray amin'ireo toeram-ponenana tsara indrindra ao amin'ny firenena aza ny tanàna, tsy milomano fa tsy ny hevitra tsara indrindra - ny rano dia ambany ny mari-pahaizana ambany, ary ny toetran'ny morontsiraka dia miteraka onja tsy miova. Na izany aza, ny mipetraka any amin'ny cafe eo amoron-drano, mankafy ny fijerin'ny ranomasina - izany dia manana fahafinaretana manokana. Ankoatra izany, misy toerana maro mahaliana eto, izay mitsidika tsy tapaka. Ary raha manapa-kevitra ny handany fotoana malalaka ianao ao amin'ity tanàna ity, dia ilaina ny mianatra kely momba ny hotely ao Lima.
Aiza no hijanona ao Lima?
Ny hotely tsara indrindra, fivarotana fahatsiarovana sy trano fisakafoanana mahazatra dia hita any amin'ny faritr'i Miraflores. Ireo tranobe ireo dia tena mahaliana mahavariana ny fomba amam-panao amin'ny fomba teknolojika. Azo atao ny manavaka ireo loha-loha 5 ao an-tanànan'i Lima ao amin'ilay faritra:
Sol de Oro Hotel & Suites . Manolotra dobo an-kalamanjana, toeram-pitsaboana sy spa. Any amin'ny manodidina azy no misy ny fivarotana lehibe ao Larcomar, ary ny seranan'i Jorge Chavez International dia 40 minitra monja. Ankoatr'izay, mijanona ao amin'ny efitrano maimaim-poana ny ankizy - ny zaza latsaky ny roa taona dia omena alalana kely, raha zaza 2 ka hatramin'ny 5 kosa no asaina mijanona amin'ny fandoavana saram-batana, akaikin'ny ray aman-dreny. Ny sakafo maraina dia asiana buffet.
JW Marriott Hotel Lima . Io trano fandraisam-bahiny io dia manana efitra mahavariana ahitana ny fijerin'ny Oseana Pasifika. Toeram-pisakafoanana misokatra ho an'ny vahiny. Misy karazana sampan-tsakafo maromaro omena - masajo, sauna, fitsaboana sy fikarakarana vatana. Ny strandin'i Costa Verde sy ny tsangambaton'i Huaca-Pucllana dia eo amin'ny 8 minitra miala amin'ny fiara. Ny hotely dia manana trano fisakafoanana mahandro sakafo nentin-drazana.
Thunderbird Hotel Fiesta & Casino . Eo afovoan'ny distrikan'i Miraflores. Any amin'ny manodidina, dia Kennedy Park sy Larco Mar Shopping Center. Ny efitrano dia malalaka sy mendrika, ary misy lakozia kely sy trano fialan-tsasatra. Manokatra 24 ora isan'andro ny casino. Manome dobo filomanosana ny hotely. Ny hotely dia manana restaurant Thunderbaird Fiesta, izay manompo sakafo iraisam-pirenena sy eo an-toerana.
DoubleTree El Pardo nataon'i Hilton Lima . Io trano fandraisam-bahiny io dia miavaka amin'ny fanamarihana Peroviana amin'ny fivalanana sy ny dekor. Ireo efitrano malalaka dia marevaka amin'ny endriny hazo marevaka sy ny planeta marevaka. Ny hotely dia manolotra toeram-pisakafoanana, dobo filomanosana, sauna. Ny hotely dia manana trano fisakafoanana. Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Jorge Chavez dia 9 km miala, ary ny Larkomar Entertainment Center dia vitsy kely sisa.
Hotely Stefano . Hotely tsara ho an'ny fitsangatsanganana ara-barotra, satria miorina eo afovoan'ny distrikan'i Miraflores. Ny sakafo maraina dia buffet style. Tokony ho 200 metatra mankany Kennedy Park.
Raha miresaka safidy mora kokoa ho an'ny trano fandraisam-bahiny, anisan'izany ny trano fialofana, dia ilaina ny manonona tranombarotra toy izany:
Casa Wayra B & B Miraflores . Ity trano fandraisam-bahiny mahatalanjona toy ny "fandriam-pahandroana sy fandriana" dia alevina any anaty ala ihany. Ny endriky ny efitrano dia ao amin'ny fomba Peroviana. Ny vahiny dia afaka miala sasatra ao an-jaridaina na eo amin'ny lakozia. Ny sakafo maraina dia ampiasaina amin'ny fomba Amerikanina, miaraka amina voankazo sy sira voajanahary. Manakaiky dia misy fijanonana izay ahafahan'ny fiarabe fitateram-bahoaka mankany amin'ny kianjan'ny tanàna , toerana misy ny katedralina , ny Lapan'ny tanàna , Torre Talje , ny lapan'ny arsevekè ary café maro kanto.
Condor's House . Ny trano fialamboly mahazatra indrindra. Naseho ho efitra efitrano kely sy fandriana tao amin'ny efitrano iombonana ho an'ny fandriana maro. Any amin'ny faritra manodidina dia ny tranobe Jaca Puklana, ary 15 minitra dia mandeha - ny foiben'i Lima.
Pucllana Lodge . Tranom-bolo tsara tarehy. Misy lakozia iombonana miaraka amin'ny fitaovana ilaina rehetra, efitrano fandraisam-bahiny mahazatra, ny zavatra rehetra ilaina ho an'ny akoho. Misy efitra fanasan-damba sy fisakafoanana.
Ny atao hoe karazana, misy ihany koa ireo safidy azo aleha, toy ny fianaram-pianakaviana. Raha miteny tsy amim-pisalasalana ireo fianakaviana manana lanjan'ny habaka malalaka ho an'ny saram-pitsaboana mety hamela azy hiaraka amin'ny alina. Any Lima dia afaka manofa trano ihany koa ianao. Ity karazana fitsinjaram-pahefana ity dia matetika no nofidian'ny fianakaviana miaraka amin'ny ankizy maromaro izay tia manomana ny sakafony manokana. Azonao atao, ohatra, ny trano fialan-tsasatra iray manontolo izay azon'ny Residencial Sori . Misy ny zavatra rehetra ilainao - misy lakozia mahafinaritra, cable TV, tranokala maimaim-poana, ary fitehirizana entana mihitsy aza. Ary ny tena zava-dehibe - 5 km eo ho eo ny foiben-toerana manan-tantara ao Lima.
Ho an'ny mpizahantany amin'ny marika
Però - firenena iray mahantra, na dia eo aza ny firoborobon'ny mpizahatany. Noho izany, ny tahan'ny heloka bevava eto dia avo avo. Mba hisorohana ireo toe-javatra ratsy, dia tsara kokoa ny tsy mamoy ny fahamalinana.
Ny vehivavy dia tsy tokony handeha manodidina ny tanàna tsy mifanaraka, indrindra fa ao anaty haizina.
Ny firavaka sy ny vola rehetra ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny dia tokony voatery hikatona ao amin'ny toerana azo antoka.
Ao amin'ny trano fialofana, tokony hisongadina manokana ny fiarovana ny fitehirizana zavatra.
Ny taxi dia tsara indrindra azo atao ao amin'ny hotely, na dia mety ho lafo kokoa aza.
Tsarovy fa ny tanànan'i Lima no faritanin'ny firenena be mponina indrindra. Ny hotely tsara indrindra dia voarakitra an-kalamanjana, indrindra fa trano fandraisam-bahiny, satria tsy mahasalama ny mitory eny an-dalambe ao an-drenivohitra.
Fanatanjahan-tena hanamafy ny hozatry ny lamosina
Ary aiza ny tratra? Amber Hurd ao amin'ny kapa mena amin'ny Festival Festival Cannes
Ice Age - fanasana amin'ny gaza
Bibidia mavesatra be dia be - ny omen
Antony 30 tokony hijerena ireo alika Rottweilers izay tsy noforonina ho an'ny fitiavana
Manomana ny cascade amin'ny volo lava
Ahoana no hanafoana ny fahakiviana mitranga?
Ahoana ny fomba hanasana sehatra?
Sakafo vita amin'ny tongotra
Mandady amin'ny rantsantanana
Ny tranonjaza borovoy - toeram-ponenana medikaly ho an'ny vehivavy
Ny fototry ny hypnosis
Ahoana no fomba anaovanao taratasy miaraka amin'ny tananao?
Violets ao an-trano - famantarana
Fiandohan'ny tavoahangy trondro
Sakafo falifaly ho an'ny fahavoazana